माधवको एसले संघीय चुनावमा झापामा ओलीविरुद्ध मैदानमा उतार्ने उम्मेदवारको लाग्यो टुङ्गो ? बालकोटमा तनाव ! | Prahar News
माधवको एसले संघीय चुनावमा झापामा ओलीविरुद्ध मैदानमा उतार्ने उम्मेदवारको लाग्यो टुङ्गो ? बालकोटमा तनाव !
काठमाडौं । यतिबेला स्थानिय तहको चुनावका लागि दलहरु तालमेल देखि चुनावी प्रचारप्रसारका लागि अहोरात्र खटिन थालेका छन् । प्रमुख दलहरु एउटाबाट अर्कोमा नेताकार्यकर्ताहरु प्रवेश गर्नेको लहर नै चलेको हो ।
एमालेले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता त्यागेको र पार्टीभित्र केपी शर्मा ओलीको अधिनायकवाद हाबी भएको भन्दै काफ्लेले एमाले त्यागेको घोषणा गरेका छन् । पार्टीभित्र आन्तरिक एकताका लागि गरिएको प्रयत्न सफल नभएकाले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेको उनले बताए । ‘एमालेभित्रै रहेर यसलाई लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउन कोसिस गरियो तर चितवन महाधिवेशनबाट ओलीले पार्टीलाई अधिनायकवादतिर लगे ।
जनवर्गीय संगठनमा पनि चुनाव हुन नदिई खल्तीबाट नाम झिकेर पढ्न थालेपछि एमाले कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि अयोग्य भयो भन्ने निष्कर्षका साथ नयाँ यात्रामा लागेको छु’, काफ्लेले भने । एमाले विभाजनका बेला सनाखतमा अनुपस्थित भएर १० बुँदे पक्षधर बन्दै काफ्ले समाजवादीमा लागेका थिएनन् । एकीकृत समाजवादीले उनलाई पोलिटब्यूरो सदस्यको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
झापा क्षेत्र नम्बर २ का काफ्लेले आगामि निर्वाचनमा ओलीविरुद्ध चुनाव लड्ने घोषणा समेत गरेका छन् । ‘झापामा केपी ओली जुन क्षेत्रबाट चुनाव लडेपनि उनीविरुद्ध उभिने संकल्प गरेको छु’, काफ्लेले भने ।
‘आयोगले दलहरूसँग परामर्श गरेको छैन। मतपत्रको रङ बदल्दा सत्तागठबन्धनसँग छुट्टै छलफल भएको छ। भित्रभित्र रङ बदलेर हरियो रूख किन राख्नुपर्थ्यो। सकेदेखि अरू पनि हरियो बनाउन पर्थ्यो। सूर्य कसरी हरियो हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई रातो सूर्य देऊ न त।’ सरकारले आयोगसँग छलफल गरेर मतपत्रमा हुने चिन्हको रङ हरियो बनाएको दाबी ओलीको थियो। उनले यसपालि चुनावमा मतपेटिका आफूहरूकै वरपर हुनुपर्ने बताएका छन्।
‘यसपल्ट मतपेटिका हाम्रो आँखाबाट पर हुँदैन। हाम्रो आँखा अगाडि मतपेटिका हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसपल्ट मतपेटिका मत गनेर नसकिँदासम्म छोड्ने होइन। पहिले सुनसरी ३ मा यस्तै भएको छ। सजगता अपनाउनुपर्छ।’ उनले पार्टी प्रवेशको लहर नै चलेको बताए। उनले केही मुद्दा सर्वोच्चमा रहे पनि एमालेले कुनै पनि दबाब नदिने बताए।
‘हामी अहिलेको गठबन्धनले जस्तो अदालतलाई प्रहार गर्दैनौं,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च साँच्चिकै सम्मानित हुन सकोस्। यो स्वच्छ थलोका रूपमा आम जनताले सम्मान गर्न पाउन भन्ने चाहन्छौं।’
स्थानिय तहको चुनाव